ZOMA 18 MEY 2018
TARANJA BASKET-BALL : Raikitra indray ny “Smatch-in” ho an’ireo sekoly ambony
Raikitra indray andiany fahenina amin’ny “smatch-in” amin’ity taona ity. Fifaninanana basket-ball natokana ho an’ireo sekoly ambaratonga ambony miankina sy tsy miankina amin’ny Fanjakana izy ireo. 19 avril 2017
Hanomboka ny 22 avrily ho avy izao ny fifaninanana ka mandritra ny sivy andro no hanatanterahana izany etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina.
Araka ny fanazavana noentin’ny mpikarakara dia tsy natokana ho an’ireo mpitia basket-ball ihany akory ny “smatch-in” fa natao ho an’ireo mpianatra rehetra mihitsy, ary isany tanjona ao anatin’ny hetsika ny hampiray ny mpianatra rehetra amin’ireo sekoly ambony ka amin’ny alalan’ny fifaninanana tahaka izao.
Tao anatin’ny dimy taona nifanesy izay no nisian’ity fifaninanana ity ary hatramin’izay dia fahombiazana hatrany no azon’ny mpikarakara. Amin’ity andiany fahenina manaraka ity kosa dia hiavaka ny lalao satria ankoatra ny basket-ball dia hisy ihany koa ny fisafidianana izay vehivavy tsara tarehy indrindra, hisy ihany koa ny fifaninanana mandihy ary ny fifaninana “jeux vidéo”, izay isan’ny zava-baovao tanteraka mbola nisy hatramin’izay.
Voalaza fa niampy efatra mihoatra noho ny hatramin’izay ireo sekoly ambony mpandray anjara amin’ity andiany fahenina ity. Hatrany amin’ny 25 ny isan’ireo sekoly hiatrika ny fifaninanana.
Maty nisy nitifitra ny Ben’ny tanàna Toto Basile AMBATO BOENY (220) 18 mai 2018 Nifanitsa-kitro ny diabe niainga avy eny Ankatso omaly HETSIKY NY SOLOMBAVAMBAHOAKA HO AN’NY FANOVANA (200) 17 mai 2018 Tsara lamina ny paikady hiatrehana ny tolona manomboka anio HETSIKA HO AMIN’NY FANOVANA (177) 16 mai 2018 Mikatso ny asa rehetra, manao fitokonam-be ireo mpiasa MINISITERAN’NY ASAM-PANJAKANA (162) 16 mai 2018 Nakaton’ny mpitolona ny haino aman-jerim-panjakana Tvm sy Rnm MANAKARA (133) 16 mai 2018 Hajanona ny fandoavan-jiro sy ranon’ny Jirama TOLONA HO AN’NY FANOVANA AO TOLIARA (130) 18 mai 2018